မိတ္ထီလာမြို့အကြမ်းဖက်လူသတ်၊လုယက် မှုကြီးမှာ ကြိုတင် ကြံစည် လုပ်ဆောင်ချက် ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရ … | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
Posted by Daily News Share this:PrintTweetEmailShare on TumblrLike this:Like Loading...
This entry was posted on April 2, 2013, in နိုင်ငံတကာသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ကမ္ဘာ့မွတ်ဆလင်ခေါင်းဆောင်များမြန်မာမွတ်ဆလင် အရေးဆွေးနွေး၊ World Muslim body to meet on Myanmar violence	Photo News: မီးလောင်ကျွမ်းမှုမှာသွေးရိုးသားရိုး ဖြစ်စဉ်မဟုတ်၊အစိုးရမှဖော်ထုတ်ပေးရန် PCN အဖွဲ့မှ(၈၈)မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုထွန်းကြည်မှ မီဒီယာများသို့ ပြော .. .. →